Chitupa chekutsvaga Anbotek
1. Zadza izere zita remunyoreri uye chitupa nhamba yemubvunzo iwe yaunoda mubhokisi rekuisa (ndapota isa nhamba yemushumo chete yemushumo, uye password yekunyorera izuva rekupedzisa kwenyaya, zuva, mwedzi uye gore. Kana chirevo chechitupa munaJune 11, 2017 chapera, password yekunyorera iri 11062017).
2. Ndokumbirawo usashandise kiyi yemuchadenga kana uchizadza fomu.
3. Zvitupa zvisina kupfuudza kunyorera kwaAnbotek hazvina kuiswa mukubvunza.
4. Kana chitupa chako chisati chavapo, zvinogona kunge chitupa chako chisina kuiswa mudura redu. Ndapota taura nesu.
Nekuda kwekuvanzika kwechirevo cheruzivo rwevatengi, ino yekubvunza system inongogona chete kuvimbisa huchokwadi hwesitifiketi nhamba yawabvunza uye yakakosha ruzivo rwechigadzirwa.
Chikero chetsamba yemumhepo: Service@anbotek.com
Chitupa / chirevo chekubvunza manotsi uye anbotek test share chirevo:
1. Iri basa rekubvunza rinongoshanda chete kune vatengi vakasaina chibvumirano chebvunzo chakapihwa nekambani yedu kuti vatarise maitiro ekuedzwa kwemasampuli avo uye vatarise mhedzisiro yemiedzo. Yekupedzisira mhedzisiro mhedzisiro yemasampuli ari pasi peye bvunzo mushumo zvakatumirwa zviri pamutemo nekambani yedu kumutengi.
2. Pasina mvumo yakanyorwa yekambani yedu, hapana munhu anoteedzera, kudhinda kana kushandisa iyi dhata yemubvunzo mune chero imwe nzira; Pasina kusimbiswa kwakanyorwa kwekambani yedu, iyi data yekubvunza haimiriri chero kuongororwa kwesampuli yakatumirwa uye chinhu chimwe chete chechigadzirwa chinomiririrwa. nemuenzaniso, uye haina chero chitupa chinoshanda.
3. Kurasikirwa kwehupfumi kunokonzerwa nevatengi, kambani kana chero wechitatu nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwevatengi kwesimba ravo rekubvunza, ruzivo rusiri pamutemo rwevamwe kana mvumo isingatenderwe yevamwe inotakurwa nevatengi ivo pachavo, uye kambani haizotakuri chero zvikwereti zviri pamutemo.
4. Kana mutengi aine chero chinopesana nemhedzisiro yemubvunzo, ndapota nyorera kambani yedu nenguva. Kambani yedu inozvitarisa munguva yekutanga uye kubatsira kubata nazvo.
Chitupa hachiwanikwe kana:
1) zvinogona kunge chitupa chawakabvunza hachina kuiswa mudura redu.
2) iyo yemubvunzo ruzivo rwechitupa iwe chawakanyora chakashata; Ndokumbira utarise kopi yesitifiketi uye utumire kune service@anbotek.com. Tichapindura nekupindura nekukurumidza sezvazvinogona.